Zuru ezu Ozi banyere "xxx.mdf abụghị A Bụ Isi Database File" Error
Home ngwaahịa DataNumen SQL Recovery xxx.mdf abughi faili nchekwa data mbu
Mgbe ị na-achọ itinye nchekwa data .MDF na SQL Server, ị na-ahụ ndị na-esonụ njehie ozi:
Toghachite data maka arịrịọ a agaghị. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)
Ewezuga mere mgbe ekpede a Transact-SQL nkwupụta ma ọ bụ ogbe. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
xxx.mdf abụghị isi faịlụ nchekwa data. (Microsoft SQL Server, Njehie: 5171)
ebe 'xxx.mdf bu aha faili MDF ka etinyere ya.
A na-echekwa data dị na faịlụ MDF dị ka ibe, ibe ọ bụla bụ 8KB. A na-akpọ ibe mbu ibe peeji nke isi faịlụ, nke nwere most ozi dị mkpa gbasara faịlụ ahụ dum, dị ka mbinye aka na faịlụ, nha faịlụ, ndakọrịta, wdg. peeji ndị fọdụrụ na-enwekwa ozi dị mkpa, gụnyere ozi oke peeji yana data ahụ.
Ọ bụrụ na peeji nke isi nke MDF, ma ọ bụ peeji njikwa ndị ọzọ dị mkpa mebiri emebi ma ọ bụ merụọ, Microsoft enweghị ike ịmata ya SQL Server, mgbe ahụ, SQL Server ga-eche na faịlụ niile abụghị ezigbo faịlụ nchekwa data dị mkpa ma kọọ njehie a.
Ihe nlere nke MDF rụrụ arụ nke ga - akpata njehie:
SQL Server 2005 Njehie1_1.mdf Njehie1_1_fixed.mdf
SQL Server 2008 R2 Njehie1_2.mdf Njehie1_2_fixed.mdf
SQL Server 2012 Njehie1_3.mdf Njehie1_3_fixed.mdf
SQL Server 2014 Njehie1_4.mdf Njehie1_4_fixed.mdf